Sesabantwana—Isifundo Ngokuba Nobubele
NGABA uyazi ukuba yintoni umkhethe?— Umkhethe kukusuka ungamthandi omnye umntu ngenxa nje yokuba engafani nawe okanye ethetha ulwimi olwahlukileyo kolwakho. Ngoko ukuba nomkhethe kukumcingela kakubi okanye ungamthandi omnye umntu ngaphambi kokuba umazi kakuhle.
Ngaba ucinga ukuba kufanelekile ukusuka ungamthandi omnye umntu ngaphambi kokuba umazi kakuhle okanye ngenxa nje yokuba engafani nawe?— Enyanisweni, ukuba nomkhethe akulunganga, yaye asikokuba nabubele. Asifanele singabi nabubele komnye umntu ngenxa nje yokuba engafani nathi.
Khawucinge nje ngoku kulandelayo. Ngaba kukho umntu omaziyo onebala elahlukileyo kwelakho okanye othetha ulwimi olwahlukileyo kolwakho?— Kusenokwenzeka ukuba kukho nabantu obaziyo abangafaniyo nawe ngenxa yokwenzakala okanye ukugula. Ngaba ubonakalisa ububele nothando kwabo bangafaniyo nawe?—
Sifanele sibaphathe njani abantu abangafaniyo nathi?
Ukuba siyamphulaphula uMfundisi Omkhulu, uYesu Kristu, siya kubonakalisa ububele kubo bonke abantu. Akufanele kwenze mahluko kuthi ukuba umntu ngowaliphi ilizwe okanye linjani ibala lakhe. Sifanele sibe nobubele kuye. Nangona abanye abantu besenokungavumelani noku, kodwa eso sisifundo esafundiswa nguYesu. Makhe sithethe ngaso.
UmYuda othile owayenomkhethe kwabanye abantu waya kuYesu waza wambuza wathi, ‘Ndimele ndenze ntoni ukuze ndiphile ngonaphakade?’ UYesu wayesazi ukuba kusenokwenzeka ukuba loo ndoda yayifuna athi sifanele sibonakalise ububele kubantu bohlanga lwethu okanye besizwe sethu kuphela. Ngoko kunokuba awuphendule ngokwakhe loo mbuzo, uYesu wabuza loo ndoda wathi: ‘Yintoni uMthetho kaThixo othi simele siyenze?’
Loo ndoda yaphendula yathi: ‘Umele umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho yonke, yaye umele umthande ummelwane wakho njengawe siqu.’ UYesu wathi: ‘Uphendule kakuhle. Qhubeka usenza oko yaye uya kubufumana ubomi obungunaphakade.’
Noko ke, loo ndoda yayingafuni kubonakalisa ububele, okanye uthando kubantu abangafani nayo. Ngoko yazama ukufumana indlela yokuzithethelela. Yabuza uYesu yathi: “Ngubani ngokwenene ummelwane wam?” Kusenokwenzeka ukuba yayifuna uYesu athi: “Abamelwane bakho ngabahlobo bakho,” okanye “Ngabantu abafana nawe.” Ukuze aphendule loo mbuzo, uYesu wabalisa ibali lomYuda nomSamariya. Elo bali lalisithi.
Kukho ndoda ithile eyayisihla ngendlela ivela kwisixeko saseYerusalem isiya eYeriko. Loo ndoda yayingumYuda. Njengoko yayihamba yabanjwa ngabaphangi. Bayihlasela baza bayithatha imali neempahla zayo. Bayibetha baza bayishiya ecaleni kwendlela yenzakele gqitha.
Kungekudala emva koko, kwavela umbingeleli esiza ngaloo ndlela. Wayibona loo ndoda yenzakeleyo. Yintoni wena owawuya kuyenza?— Yena ke loo mbingeleli wasuka wahamba kwelinye icala lendlela. Akazange eme nokuma oku. Akazange enze nento le ukuze ancede loo ndoda.
Emva koko kwavela enye indoda eyayiphambili elunqulweni isiza ngaloo ndlela. YayingumLevi okhonza etempileni eYerusalem. Ngaba yena wema ukuze ayincede?— Akazange eme. Naye wenza kanye njengaloo mbingeleli.
Ekugqibeleni, kweza umSamariya. Ngaba uyambona njengoko ejikela kwelo gophe lendlela?— Wabona loo mYuda elele apho enzakele gqitha. Noko ke, inkoliso yamaSamariya namaYuda ayengathandani kwaphela. (Yohane 4:9) Ngaba yena loo mSamariya wayeza kuyishiya engayincedanga loo ndoda? Ngaba wathi: ‘Ingenzeka njani into yokuba ndincede lo mYuda? Ebengayi kundinceda ukuba ibindim lo wenzakeleyo’?
Kwakutheni ukuze umSamariya abe ngummelwane olungileyo?
Loo mSamariya wakhangela kuloo ndoda yayilele ecaleni kwendlela, waza wayisizela. Waziva engenakukwazi ukuyishiya apho isifa. Ngoko wehla eqegwini lakhe, waya kuloo ndoda, waza wagalela ioli newayini kumanxeba ayo. Oku kwakuza kuwaphilisa loo manxeba. Emva koko wawabopha ngelaphu.
Ngocoselelo loo mSamariya wayikhwelisa loo ndoda kwiqegu lakhe. Emva koko wathi chu wehla ngendlela de waya kufika kwindlu yabahambi, okanye ihotele encinane. Apho umSamariya wayifunela indawo yokuhlala loo ndoda, waza wayinyamekela.
Wandula ke uYesu wabuza loo ndoda wayethetha nayo wathi: ‘Ngubani kula madoda mathathu ocinga ukuba wayengummelwane olungileyo?’ Wawunokuthini wena? Ngaba ngumbingeleli, ngumLevi, okanye ngumSamariya?—
Loo ndoda yaphendula yathi: ‘Ummelwane olungileyo yaba yiloo ndoda yemayo yaza yanyamekela leyo yayenzakele.’ UYesu wathi: ‘Uchanile. Hamba uye kwenjenjalo nawe.’​—Luka 10:25-37.
Ngaba yayingelobali limnandi elo? Lenza kucace ukuba ngoobani abamelwane bethu. Asingobahlobo bethu basondeleyo nje kuphela. Yaye asingobantu nje abanebala elifana nelethu okanye abathetha ulwimi lwethu kuphela. UYesu wasifundisa ukuba sibe nobubele kwabanye abantu kungakhathaliseki ukuba bavela phi, banjani, okanye bathetha luphi ulwimi.
Le yindlela enza ngayo noYehova uThixo. Akanamkhethe. UYesu wathi: ‘UYihlo osemazulwini ulenza ilanga lakhe liphume kubantu abangendawo nabalungileyo. Nemvula uyinisa kubantu abalungileyo nabangalunganga.’ Ngoko ke, sifanele sibonakalise ububele kubo bonke abantu, kanye njengoThixo.​—Mateyu 5:44-48.
Unokwenza njani ukuze ube ngummelwane olungileyo?
Ngoko xa ubona umntu owenzakeleyo, yintoni oya kuyenza wena?— Kuthekani ukuba loo mntu ngowelinye ilizwe okanye unebala elahlukileyo kwelakho? Naye ngummelwane wakho, yaye ufanele umncede. Ukuba usemncinane kakhulu ukuba ungakwazi ukumnceda, ungacela umntu omdala ukuba amncede. Okanye usenokucela uncedo kwipolisa okanye kutitshala. Oko kukubonakalisa ububele, njengaloo ndoda yomSamariya.
UMfundisi Omkhulu ufuna sibe nobubele. Ufuna sibancede abanye, kungakhathaliseki ukuba bangoobani na. Walibalisa ngaloo njongo eli bali lomSamariya onobubele.
Ngokuphathelele esi sifundo sokubonakalisa ububele kwabanye abantu kungakhathaliseki ukuba ngabaluphi na uhlanga okanye ilizwe, funda IMizekeliso 19:22; IZenzo 10:34, 35 nese-17:26.
Ibhinqa Elithile Lenzela UElisha Ububele